Guddoomiyaha UCID: Qaar Ka Mid Ah Danaha Dhaqaale Ee Maskaxdiisa Dooriyay!. Siciid Maxamud Gahayr
Thursday May 30, 2019 - 19:26:56 in Wararka by Super Admin
"Amakaagay goortay wankii, adhaxda tuujeene” Ismaaciil Mire.
Aniga oo Golaha Dhexe ee UCID ayaa la i xidhay 20kii Ogos 2016kii waa uu diiday in uu toos uga hadlo. Waxa uu yidhi"Waxa ka fiican in aan la hadlo cidda uu u xidhan yahay”. Waayadaas waxa socday mashaariicdii kiraynta dekedda Berbera. Aniga oo xidhan ayaa 8dii Sebtember 2016ka xaflad ku saabsan Marsada Berbera lagu qabtay Greenplaza. Wuxuu kaga dhabeeyay "martiyi, marti way ka naxdaa". Shaw nin wax quudaya ayay qoollaaliyeen!
Faysal waxa uu yidhi "Tilifoonno badan ayaa igu soo dhacaya. In aanu lacag soo qaadnay baa la moodayaa. Imakaba waxba ma aannu soo qaadin”. Dooddayda waxa ay cubba-dhawr ku ahayd tuumbo dheer iyo macmacaan la muudmuudsanayay. Intaas uu awooday ayaan ku mahadinyaa..
Markii dambe ee la soo qaaday lacagtii xaqul-qalinka, waxa ay saxaafaddu gudbisay Faysal oo leh"Wasiirkii Madaxtooyadu wuu iga dhuuntay”. Taas macnaheedu waxa weeye waxa aan meesha ugu dhex jiro dillaalid, mallafsi iyo boob.
Dacwaddii lagu oogi lahaa, waxa la baajiyay kaddib markii uu Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ka tanaasulay in sharciga la mariyo xildhibaannadan. In la kala qaatay waxoogaa fara-guudkood ah baa xan nagu soo gaadhay. Mar dambe ayuu hinaase ka daba bilaabay oo ay lix xildhibaan oo UCID ahi ku biireen KULMIYE 6dii Feb 2017ka, waa ku dhawaad afar gu’ kaddib. Ninka 2013 ku biiray KULMIYE maxaad 2017 ka dacwayn, sawdigii ogaa? Mise mar labaad ayaa la ruxanaya
"Riyahaas qal oo qari” buu i yidhi
"Reerkiinna tuurtuur” buu i yidhi